Hiverina ny hetra deduction rehefa mividy an-trano: antontan-taratasy. Duration ny hetra refund rehefa mividy an-trano - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Hiverina ny hetra deduction rehefa mividy an-trano: antontan-taratasy. Duration ny hetra refund rehefa mividy an-trano
Ny fahatsiarovana azy ireo dia tsy dia sarotra
Noho izany, amin'izao fotoana izao isika dia ho liana amin'ny ny termreturn hetra deduction rehefa mividy trano, ary koa ny lisitry ny ny antontan-taratasy izay ho takiana ho fanekena ny mety manam-pahefanaRaha ny marina, io fanontaniana io dia tsy mahaliana sy ny mahasoa ny maro. Rehefa dinihina tokoa, raha mandoa ny hetra sy ny fanaovana ny varotra sasany, dia afaka miverina fotsiny ny 'tsy ofisialy' ny vola ny tenanao. Mahafinaritra bonus avy amin'ny fanjakana, izay manintona ny maro. Fa ity dingana ity dia ny teny sy ny fitsipika ho an'ny fisoratana anarana. Ahoana no fomba ny hetra bola hiverina rehefa mividy an-trano? Inona ny antontan-taratasy ilaina? Ny zavatra tsy ampy fanononana tsy, amin'ny ankapobeny, dia afaka mandray ny fahafahana? Tsy maintsy misy ny sasany, fara fahakeliny, fetra! Eny, izy ireo. Fa ny momba azy aoriana kely. Rehefa avy rehetra, manomboka amin'ny, izany no mahasoa ny mandinika amin'ny an-tsipiriany ny zavatra lazaina amin ny fitsipika. Tena afaka miverina avy amin'ny raharaham-barotra? Ary tsy misy fetra ny hiverina? Ny hetra deduction, toy ny fitsipika, dia mamela anao hahazo ny ny fandaniana. Ity dingana ity dia manana ny famerana ny vola izay dia niverina ho any amin'ny mpandoa hetra. Izany dia roubles. Hiverina manana ny marina afa-tsy vola avy any an-trano, ny vidin-hatramin'ny p. Na aiza na aiza ny manokana ny fitsipika. Mihoatra noho ny arivo tsy afaka ny ho niverina amin'ny fomba rehetra. Izany no tsy ara-dalàna. Nefa aza manahy be loatra. Rehefa dinihina tokoa, ny fe-potoana ho an'ny fiverenan'ny ny hetra deduction rehefa mividy trano, dia tsy kely izany. Dia tena tsy manana fotoana mba hiomanana ho azy. Eny, ary amin'ny ankapobeny, ny fisoratana anarana amin'ny araka ny tokony ho fanangonana ny antontan-taratasy dia toa hamaivanina. Ny zavatra tsy ampy fanononana tsy maintsy meetthe mpandoa hetra? Amin'ny ankapobeny, ny fananany deductions, toy ny hafa, afaka omena ao anatin'ny taona taorian'ny raharaham-barotra. Izany hoe, tsy ilaina avy hatrany araka ny fividianana mba maika ny manomana ny antontan-taratasy. Eny, tsy tokony hisalasala, fa ho raiki-tahotra ianao fa tsy manana fotoana mba hametraka ny hevitra dia tsy amin'ny fomba tsara indrindra.
Noho izany, dia tsy ho gaga ianao
Amin'ny fampiharana, matetika ny fe-potoana ho an'ny fiverenan'ny taxThe deduction rehefa mividy trano, dia napetraka tao amin'ny taona. Tsia, afaka tanteraka izany taty aoriana. Fa ny olom-pirenena dia ampiasaina mba antontan-taratasy mandra-pahatapitry ny hetra tatitra fe-potoana. Noho izany, raha ny marina, izy ireo miezaka ny hanary na dia amin'ny deductions haingana araka izay azo atao. Tsy izany no tena sarotra, toy ny mety toa tamin'ny voalohany. Rehetra izany no ilainao dia ny hanangona ny sasany lisitry ny antontan-taratasy, fanomezana azy ireo ny hetra ny asa fanompoana, ary avy eo dia miandry fotsiny. Ankehitriny vaovao fanontaniana mipetraka. Inona no fe-potoana farany, ny refund ny hetra bola rehefa mividy an-trano rehefa avy ny fampiharana no nametraka? Rehefa dinihina tokoa, tokony ho fantatrao ny ela ny hetra manam-pahefana dia ny fandinihana ny raharaha. Eto izany dia sarotra ny ho avy amin'ny mahazatra ny heviny. Indrindra rehefa heverina fa ao amin'ny faritra samy hafa isan-karazany ny faharetan'ny fankatoavana na deduction azo atao, tsy voatery ny fananana iray. Inona no hitranga eo ho eo? Inona no long no tokony hatao mba hahazoana ny hetra bola rehefa mividy an-trano? Ny famerenana amin'ny mpandoa hetra matetika dia milaza fa ny zavatra rehetra dia ho nomena momba ny volana. Izany no fomba be dia be ny deduction dia ho vita rehefa ampiharina.
Avy io fe-potoana momba ny volana ihany ny fampiharana no heverina.
Sy ny sisa ny fotoana, vola dia nafindra tany amin'ny mpandoa hetra ny kaonty. Indraindray izany dingana maharitra kely, indraindray mihoatra. Fa ny eo ho eo dia ilaina ny fanisana ny volana. Izany no fe-potoana farany ho an'ny refunding ny hetra deduction rehefa mividy an-trano rehefa avy nametraka ny antontan-taratasy ho an'ny famerenana. Raha toa ka ilaina indray ny famolavolana, tsy maintsy 'reset the counter. 'Ary indray manisa ny efa-bolana.
Amin ny fitsipika, izany dia tsy toy izany ny olana.
Eny ary, ankehitriny tonga ny fotoana mba hahazo tsipiriany kokoa handinika mivantana lisitry ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fandidiana. Raha ny hevitrao momba izany, dia hiverina ny hetra bola rehefa mividy an-trano dia tsy dia sarotra.
Ianao dia tsy mila be dia be ny taratasy.
Ny hevi-dehibe vitsivitsy dia ampy. Sy ny rano indray mitete ny faharetana. Noho izany, aiza no tokony hanomboka? Mazava ho azy, miaraka amin'ny angon-kira sy ny fanoratana ny manan-danja fampiharana. Ny hevitra rehetra dia misy deduction tokony omena ihany raha toa ka ny taratasy ilaina dia ampy. Amin'ny ny fangatahana ny mpangataka. Ny santionany avy amin'ny famenoana afaka jerena ao amin'ny vohikala ofisialin'ny ny Hetra ny asa Fanompoana ao amin'ny Federasiona rosiana. Misy ihany koa ny endrika izay hanampy ny mamolavola ny fangatahana bebe kokoa mampiasa. Izany dia omena ao amin'ny tokan-tena tany am-boalohany ny dika mitovy. Aza adino fa misy taratasy mena kasety amin'ny tsy maintsy atao mba niaraka tamin'ny fametrahana ny toetra. Izany no, ianao mila ny mety tahirin-kevitra. Eo amin'ny tranga, na inona na inona mihoatra noho ny pasipaoro. Ary ny marimarina kokoa, ny ny dika mitovy. Ho azo antoka manana ny dikasarin'ny ny pejy rehetra mialoha, ny ary ny iray misy ny fisoratana anarana dia voalaza. Vaovao momba ny sata ara-panambadiana ihany koa dia tokony ho hita. Ny tany am-boalohany, tsy mila ny deduction.
Ampy izay ny dika mitovy.
Raha tianao, dia mety ho fanamarinana ara-panjakana. Saingy, raha ny marina, maro fotsiny dia manome ny dikasarin'ny ary tsy hanelingelina. Ny manaraka hevitra mba handinika ny fidiram-bola. Ny hetra refund fe-potoana ho mividy trano dia tsy afaka manomboka ny countdown alohan'ny anao hanamarina ny mpandoa hetra sata. Izany hoe, manao tsy manondro ny vola miditra. Avy eo ianao dia tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana ny -NDFL. Izany no feno ao amin'ny tenanao.
Ary ankehitriny dia afaka manao izany amin'ny manokana fandaharana amin'ny solosaina.
Koa, tsy maintsy mampiditra ny fampiharana endrika -NDFL. Ny faharoa dia ny tahirin-kevitra no tena natao, raha ny asa ho an'ny tenanao. Raha tsy izany (toy ny mahazatra, izany no mitranga), ny taratasy dia nalaina avy amin'ny mpampiasa ny sampan-draharahan'ny fitantanam-bola. Ity dia karazana fanamafisana fa manana taxable fidiram-bola. Afa-boalohany ny andinin-tsoratra masina dia nanaiky.
Izy ireo dia ilaina ny dika mitovy iray.
Noho izany, dia diniho izany. Ny dika mitovy ny asa firaketana an-tsoratra boky dia tsy ho ilaina. Ahoana no hahatonga ny hetra refund ho mividy trano? Ny antontan-taratasy voalaza etsy ambony dia tsy izay rehetra ilaina. Ankehitriny, fa ny manan-danja ny vaovao misy, dia tsy maintsy hanamarina ny tompony ny fananany. Ary momba ny vola lany, koa, aza adino. Inona no mila eto? Voalohany, ny taratasy fanamarinana ny fananany, ny kopia, kokoa panjakàna. Faharoa, ny fifanarahana momba ny fivarotana, ary koa isan-karazany ny vola miditra avy amin'ny mpivarotra, manamafy ny zava-misy ny hamindra-ny fandraisana vola avy aminao. Taratasim-bola sy rosia (na ny marimarina kokoa, ny dika mitovy) koa tsy maintsy zavatra.
Raha tsy misy ny antontan-taratasy voasoratra, dia tsy ho afaka hampihatra ny hevitra niverina.
Momba izany raharaha izany dia tsy mitsahatra.
Ny fiverenan'ny ny hetra deduction rehefa mividy trano ho an'ny olona efa retirety ary tsy mitaky matetika kokoa taratasy mena kasety.
Izany no mahatonga ny olana be, nefa tsy manao. Noho izany, ohatra, dia misotro ronono izay maintsy manamafy ny sata sy ny soa. Manolotra dika mitovy ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana (indrindra fa manana fahasembanana), ary koa ny taratasy fanamarinana ny fisotroan-dronono. Ny olona dia tsy maintsy mampiditra ny miaramila tapakila. Izany no marina indrindra ny misotro ronono ny miaramila.
Fa izany dia tsy mifarana miaraka amin'ny lisitra na.
Izay olon-kafa afaka ny ho tonga amin'ny mora raisina? Ohatra, tena matetika ny olona no nanontany ny fampisehoana sy fanamarinana ny fanabeazana ny ankizy, ary koa ny taratasy momba ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Ireo no tsy toy izany hevi-dehibe, fa indraindray izy dia mety hanelingelina ny famolavolana. Ny marimarina kokoa amin'ny manosika azy nandritra ny fotoana kelikely. Ampy ny mahazatra indrindra ny dika mitovy. Hametahana azy ireo fotsiny ao raharaha, ka tsy misy ilaina ny fanontaniana sy ny olana. Na izany aza hafahafa izany dia mety ho feo, fa ny antoka azonao atao ihany koa ny hahazo ny tenanao, ny sasany ny vola lany. Tena, eto ny ambony indrindra vidin'ny trano fonenana dia tsy misy intsony, saingy tapitrisa robla. Fa ny fitiavako tsy miova. Inona no fe-potoana farany ho an'ny refunding ny hetra bola rehefa mividy an-trano any antoka? Mitovy tahaka ny any ny hafa rehetra toe-javatra. Manana zo hametraka ny fangatahana ao anatin'ny taona, ny faharetan ny fandinihana, dia tokony ho ny volana.
Tsy misy fahasamihafana sy tsy ho.
Dia izay momba ny antontan-taratasy. Ny lisitra etsy ambony, dia ihany koa ny tsy maintsy hametahana ny antoka fifanarahana miaraka amin'ny vola miditra ho fandoavam-bola amin'ny tombontsoa ho an'ny raharaham-barotra.
Tsy misy azy ireo ho antoka mba hiverina ny deduction tsy miasa.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny manome ny zavatra notakiana ho replenishment ny kaonty.
Ny banky angona dia tsy maintsy voalaza ao ny fampiharana ny hetra deduction. Raha tsy misy azy fotsiny dia tsy mety. Amin ny fitsipika, na inona na inona sarotra eo amin'ny zavatra notakiana teo. Mamaritra ny kaonty, izay mba hamindra ny vola, mivantana eo amin'ny fampiharana ny nametraka ny santionany. Raha vao ny lisitra feno ny antontan-taratasy dia vonona, hiverina azy ireo ny hetra ny asa fanompoana ho an'ny famerenana. Ary ankehitriny ianao dia afaka miandry fotsiny.
Rehefa afaka kelikely dia handray ny valiny avy amin'ny manam-pahefana amin'ny fanapahan-kevitra anie ny deduction na ny fandavana milaza ny antony.
Raha toa ka nahatratra ny safidy faharoa, hanitsy ny toe-javatra, ary miezaka indray. Amin'ny tranga voalohany, dia mitoetra foana ny miandry ny mitarika ny famindrana ny vola any amin'ny kaonty.
Orinasa fisoratana anarana amin'ny asa tany Rosia - Kaonty Rosia
Rusija Ratifikavo Kioto Protokolą - Europa - Naujienų ir aktualijų visame žemyne